Varimi Vatema VekuMashonaland West Voita Mushandirapamwe neVachena
Kurume 02, 2020
Vamwe varimi kuMashonaland West vari kupinda mumishandirapamwe nevarimi vachena nenzira yekuedza kusimudzira goho uye kuti vawanewo chouviri sezvo vasina zvikwanisiro.
Vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vaiwanzotaura pamisangano kuti havaida kuti vachena vainge vatorerwa mapurazi vadzoke vachiita mishandirapamwe nevatema vainge vapihwa mapurazi.
Asi VaMugabe vaitenedera hazvo zvimwe zvibvumirano nevachena vakaita saVaBilly Rautenbach veGreenfuel kuChisumbanje uye vamwe vachena uye vamwe vekuChina kuminda yakawanda yeARDA. Vanhu vekuChina vakawanda vari kurima fodya vachishanda nekambani inonzi Tianze.
Asi hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa yakabuda pachena musi wa 28 Chikumi gore rapera kuti yaitsigira kuitwa kwemishandirapamwe iyi.
Varimi vachena vakawanda vari kuita mishandirapamwe munyika sezvakabuda muchiitiko chakaitwa pama purazi maviri anoti reSummer Hill neWamambo kuMhangura neMugovera.
Asi gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West Amai Mary Mliswa-Chikoka vachitaura pachiitiko ichi vakati zvibvumirano zvekurima nevarungu zvinofanira kunyoreranwa kumahofisi ebazi rezvekurima.
Amai Mliswa-Chikoka vakati varimi vanoti mumiriri weMakonde mudare reparamende VaKindness Paradza, Muzvare Noma Mliswa pamwe nemakambani anoti Marvellous Stewart Farming-MSF neSansaveria vari kushanda zvakanaka pamwechete.
Muzvare Noma Mliswa vanove mukoma waAmai Mliswa-Chikoka vanoti kushanda nevarungu hazvireve kuti mutengesi wechirongwa chekugoverwa kweivhu ku vanhu vatema sezvinofunga vakawanda.
Vanotiwo vamwe varimi vakagariswa patsva vanongotaurisa vasina zvavanorima muminda.
Mukuru wekambani iri kurima nevarimi ava VaBarry Stewart avo vakarima chibage nebhinzi vanoti vari kufara negoho ravo uye kukwanisa kuwanisa vanhu mabasa vanosvika mazana matatu.
VaStewart vanoti havana hurongwa hwekuwedzera varimi vatema vavari kushanda navo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezvehupfumi.
VaParadza vanoti kuita mushandirapamwe nevarimi vechichena hazvireve kuti vatadza asi hurongwa hwehurumende hunoita kuti ivo vazosara vaine zvikwanisiro zvekurimisa kana mubatanidzwa uyu wapera mumakore mashanu ari kutevera.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti varimi vakawanda vari kurimirwa nevarimi vechichena ivo vachizopihwa zvikamu gumi kubva muzana pane zvinenge zvakohwewa pagore.
Munyarikani mukuru pachiitiko ichi aive mutevedzeri wegurukota rezvekurima VaVangelis Haritatos vakati bazi razo rinocherechedza basa riri kuitwa nemadzimai mukurima vachiti vanofanirwa kuwaniswa minda yavo vega.